MB 2018 Septambra - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2018 Septambra
Hisy foana izay milaza ho mpaminany na mino fa afaka manao kajy ny andro hiverenan’i Jesosy. Vao haingana aho no nahita ny tantaran'ny raby iray voalaza fa afaka mampifandray ny faminanian'i Nostradamus amin'ny Torah. Nisy olona iray nilaza mialoha fa hiverina amin’ny Pentekosta i Jesosy 2019 hitranga. Maro amin'ireo tia faminaniana no miezaka mampifandray ny vaovao farany sy ny faminaniana ao amin'ny Baiboly. Kark Barth dia namporisika ny olona hifikitra mafy amin'ny Soratra Masina rehefa nikatsaka ny hahatakatra bebe kokoa ny tontolo maoderina tsy mitsaha-miova.
Ny tanjon'ny soratra ara-Baiboly
Jesosy dia nampianatra fa ny tanjon'ny Soratra Masina dia ny hanambara amin'Andriamanitra - ny toetrany, ny tanjony ary ny toetrany. Manome izany tanjona izany ny Baiboly amin'ny fanondroana an'i Jesosy, izay fanambarana feno sy farany an'Andriamanitra. Ny famakiana mifototra amin'i Kristy mifototra amin'i Kristy dia manampy antsika hiaina hatrany amin'ity tanjona ity ary manampy antsika hisoroka ny diso ny faminaniana.
Jesosy dia nampianatra fa Izy no foiben’ny fanambarana ara-Baiboly rehetra ary tokony handika ny Soratra Masina rehetra (anisan’izany ny faminaniana) avy ao amin’io foibe io isika. Nanakiana mafy ny Fariseo i Jesosy noho ny tsy fahombiazan’izany. Na dia nitady ny fiainana mandrakizay ao amin’ny soratra masina aza izy ireo dia tsy nahalala an’i Jesoa ho loharanon’izany fiainana izany (Jao 5,36-47). Mampihomehy fa ny fahatakarany mialoha ny Soratra Masina dia nanajamba azy ireo tamin’ny fahatanterahan’ny Soratra Masina. Nasehon’i Jesosy ny fomba handikana ny Baiboly araka ny tokony ho izy, tamin’ny fampisehoana ny fomba nanondroan’ny andinin-teny rehetra azy ho fahatanterahan’izy io4,25-27; 44-47). Ny fijoroana ho vavolombelon’ny apostoly ao amin’ny Testamenta Vaovao dia manamafy io fomba fandikana mifototra amin’i Kristy io.
Amin’ny maha-endrik’Andriamanitra tsy hita maso tonga lafatra (Kolosiana 1,15) Asehon’i Jesosy amin’ny alalan’ny fifandraisany amin’ny fifandraisany amin’Andriamanitra ny maha-zava-dehibe ny maha-izy azy, izay manondro ny fifandraisan’Andriamanitra sy ny olombelona. Zava-dehibe hotadidina izany rehefa mamaky ny Testamenta Taloha. Tena manan-danja indrindra izany mba hanakanana antsika tsy hanao zavatra toy ny fiezahana hampihatra ny tantaran'i Daniel ao amin'ny Lions Den amin'ny toe-javatra misy ankehitriny eto amin'izao tontolo izao, toy ny fifidianana ho an'ny birao politika. Tsy ao ny faminanian’i Daniela mba hilaza amintsika hoe iza no hofidiana. Ny bokin’i Daniela kosa dia miresaka momba ny lehilahy iray izay nahazo fitahiana noho ny tsy fivadihany tamin’Andriamanitra. Amin’izany fomba izany i Daniela dia manondro an’ilay Andriamanitra mahatoky izay eo foana ho antsika.
Fa angaha moa ny Baiboly no ilaina?
Olona maro no manontany hoe mbola azo ampiharina ankehitriny ny boky taloha toy ny Baiboly. Rehefa dinihina tokoa, ny Baiboly dia tsy milaza na inona na inona momba ny zavatra maoderina toy ny kloning, ny fitsaboana maoderina ary ny fitsangatsanganana eny amin'ny habakabaka. Ny siansa sy ny teknolojia maoderina dia miteraka fanontaniana sy zava-manahirana tsy nisy tamin'ny andron'ny Baiboly. Na izany aza, tena manan-danja tokoa ny Baiboly amin'izao androntsika izao satria mampahatsiahy antsika fa ny fandrosoana ara-teknolojika dia tsy nanova ny toe-piainan'olombelona na ny finiavan'Andriamanitra tsara sy ny drafitry ny zanak'olombelona.
Ny Baiboly dia manome fahafahana antsika hahatakatra ny anjara andraikitsika ao amin’ny drafitr’Andriamanitra, anisan’izany ny fahatongavan’ny fahafenoan’ny fanjakany. Manampy antsika hahita ny dikany sy ny tanjon’ny fiainantsika ny soratra masina. Mampianatra antsika izy fa tsy miafara amin’ny tsinontsinona ny fiainantsika, fa mizotra mankany amin’ny fihaonana lehibe izay hihaonantsika mivantana amin’i Jesosy. Asehon’ny Baiboly amintsika fa misy zava-kendrena eo amin’ny fiainana — noforonina mba ho tafaray sy ho tafaray amin’ilay Andriamanitra telo izay iray isika. Manome tari-dalana koa ny Baiboly mba hampiomana antsika ho amin’izany fiainana manankarena izany (2. Timoty 3,16-17). Izany dia amin’ny alalan’ny fanondroana antsika hatrany amin’i Jesosy, Izay manome antsika fiainana be dia be amin’ny alalan’ny fanomezana antsika ny fanatrehana ny Ray (Jaona. 5,39) ary mandefa ny Fanahy Masina ho antsika.
Eny, azo itokisana ny Baiboly, misy tanjona miavaka sy azo antoka. Na izany aza, maro ny olona mandà izany. Ilay filozofa frantsay Voltaire dia nanambara tamin'ny taonjato faha-17 fa hanjavona ao anatin'ny haizin'ny tantara tao anaty 100 taona ny Baiboly. Diso izy. Ny Guinness World Record dia manoratra fa ny Baiboly no boky lafo indrindra. Hatramin'izao dia mihoatra ny 5 miliara ny famarotana sy nozaraina. Izy ireo dia mahatsikaiky sy mahatsikaiky fa ny tranon'i Voltaire tany Geneva, Soisa dia novidian'ny Geneva Bible Society ary nanangana foibe fizarana Baiboly. Be dia be ho an'ny faminaniana ihany!
Mifanohitra amin'ny zavatra inoan'ny sasany, ny tanjon'ny faminaniana ara-Baiboly dia tsy ny hanampiana antsika hahafantatra ny ho avy, fa ny hanampy antsika hahafantatra an'i Jesosy ho Tompon'ny tantara. Ny faminaniana dia manomana ny lalana ho an'i Jesosy ary hanondro azy. Mariho izay nosoratan'ny apostoly Petera momba ny fiantsoana an'ireo mpaminany:
Ireo mpaminany izay naminany ny amin’ny fahasoavana voatokana ho anareo, dia nitady sy nandinika izany fahasambarana izany [araka ny voalaza ao amin’ny andininy fito teo aloha], ka nandinika hoe taiza sy amin’ny fotoana inona no notondroin’ny Fanahin’i Kristy, izay tao aminy ary nanambara teo aloha. ny amin’ny fijaliana izay hanjo an’i Kristy sy ny voninahitra any aoriana. Efa nambara taminy fa tsy ny tenany no tokony hanompoany, fa ianareo, araka izay nambara taminareo ankehitriny, tamin’ny alalan’ireo izay nitory ny filazantsara taminareo tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina, Izay nirahina avy tany an-danitra.1. Petrus 1,10- iray).
Nilaza i Petera fa ny Fanahin’i Kristy (ny Fanahy Masina) no loharanon’ny faminaniana ary ny tanjon’izy ireo dia ny hilaza mialoha ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty. Midika izany fa rehefa avy nandre ny hafatry ny filazantsara ianao dia efa nandre izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny faminaniana. Ny apostoly Jaona dia nanoratra momba izany tamin’ny fomba mitovy amin’izany: “Fa Andriamanitra kosa no ivavaho! Fa ny hafatra ara-paminaniana omen’ny Fanahin’Andriamanitra dia ny hafatr’i Jesosy” (Apokalypsy 19,10b, Fandikan-teny Genève Vaovao).
Mazava ny soratra masina: "Jesosy no lohahevitry ny faminaniana". Ny faminaniana ara-baiboly dia milaza amintsika hoe iza i Jesosy, inona no nataony ary izay hataony. Ny amin'i Jesosy no ifantohantsika sy ny fiainana omeny antsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny alàlan'ny fiarahamonina geopolitika, ny ady varotra na raha nisy olona naminany mialoha ny fotoana. Mampahery tokoa ny mahafantatra fa i Jesosy no fototra sy fanatanterahana ny finoantsika. Ilay Tompontsika dia tsy miova omaly, anio ary mandrakizay.
Ny fitiavan'i Jesosy Tompontsika dia ivon'ny faminaniana rehetra.